အသက်၂၀၀န်းကျင်မိန်းကလေးတိုင်းမဖြစ်မနေဘ၀မှာလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေက – Trend.com.mm
လူဆိုတာသူ့အသက်ရွယ်အပိုင်းခြားအလိုက်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကို မဆိုင်းမငံ့ပဲလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ချို့အရာတွေက အချိန်နှောင်းအသက်ရွယ်ကြီးသွားမှလုပ်ဖို့လည်းမသင့်တော် အဆင်မပြေတော့တဲ့အရာတွေအများကြီးပါ။ ဒါကြောင့်သူ့အရွယ်အပိုင်းခြားနဲ့သူလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေ ကိုယ်စိတ်ထဲရှိတဲ့ဟာတွေကို ရဲရဲကြီးသာလုပ်ဆောင်လိုက်ဖို့ပဲအကြံပေးပါရစေ( ထိခိုက်ပျက်စီးစေတာမျိုးမပါ) ဆိုတော့ ဘယ်လိုအရာမျိုးတွေကို အသက်၂၀ကျော်အရွယ်မိန်းကလေးတွေဘ၀မှုလုပ်ဆောင်သင့်သလဲဆိုတာ….
(၁) အလှပရေးရာကို ဂရုစိုက်ပါ
မိန်းကလေးတိုင်းကတော့ အိုတယ် ငယ်တယ်ရယ် မရှိအရွယ်သုံးပါးလုံးလှချင်နေတတ်ကြတာပါပဲ ။ဒါပင်မဲ့ လှချင်တိုင်းလည်းအရွယ်ကရှိသေးတယ်လေ ။ ဒါကြောင့်ပျိုမျစ်နုနယ်လွန်းတဲ့ဒီလို အရွယ်မှာ ရှိသမျှပိုင်ဆိုင်ထားသမျှ သဘာဝအလှတွေကို ဖော်ပြတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ နောက်မှ ငါသာငယ်ရင် ဒါမျိုးလေးလုပ်မှာဆိုတာမျိုးနဲ့နောင်တမရပါစေနဲ့။
(၂) အလုပ်တစ်နေရာကနေတစ်နေရာ ပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွေ့အခြေချဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့
အလုပ်တစ်နေရာကနေတစ်နေရာကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုကူးပြောင်းဖို့အဆင်ပြေပါ့မလား ဘာညာတွေးပူမနေပါနဲ့။ ငယ်တုန်းမှာနေရာကောင်းကိုရှာပါ ၊ ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအခြေခိုင်ဖို့ ငယ်တုန်းရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စိတ်တူကိုယ်တူခရီးစုသွားပြီး မိတ်ဆွေသစ်တွေနဲ့နေရာသစ်တွေမှာမိတ်ဖွဲ့ပါ။ လူသစ်တွေဆီကနေ သင်ခန်းစာအသစ်တွေ အတွေ့ကြုံသစ်တွေကိုမျှဝေယူပါ။
(၄) ကိုယ့်ရဲ့ဆံပင် ပုံစံ အ၀တ်စားပုံစံတွေကိုတစ်သတ်မှတ်ထဲမထားပဲပြောင်းလဲကြည့်ပါ
တစ်သတ်မတ်ကြီးတည်းမသွားပဲ ငယ်တုန်းရွယ်တုန်း နုတုန်းလှတုန်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့စတိုင်ကို အပြောင်းလဲလေးတွေဖန်တီးကြည့်ပါ။
သိပ်ကို ဦးနှောက်ညဏ်ရွှင်နေတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုမှာ လေ့လာမှုအသစ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ဖို့ စတင်ဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့။ သင်တကယ်လုပ်ချင်တဲ့အချိန်ကျရင် ဦးနှောက်ကမှတ်နိုင်စွမ်းရင်ရှိချင်မှရှိတော့မှာပါ။
လူဆိုတာသူ့အသကျရှယျအပိုငျးခွားအလိုကျလုပျသငျ့လုပျထိုကျတာတှကေို မဆိုငျးမငံ့ပဲလုပျဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တဈခြို့အရာတှကေ အခြိနျနှောငျးအသကျရှယျကွီးသှားမှလုပျဖို့လညျးမသငျ့တျော အဆငျမပွတေော့တဲ့အရာတှအေမြားကွီးပါ။ ဒါကွောငျ့သူ့အရှယျအပိုငျးခွားနဲ့သူလုပျသငျ့လုပျထိုကျတာတှေ ကိုယျစိတျထဲရှိတဲ့ဟာတှကေို ရဲရဲကွီးသာလုပျဆောငျလိုကျဖို့ပဲအကွံပေးပါရစေ( ထိခိုကျပကျြစီးစတောမြိုးမပါ) ဆိုတော့ ဘယျလိုအရာမြိုးတှကေို အသကျ၂ဝကြျောအရှယျမိနျးကလေးတှဘေဝမှုလုပျဆောငျသငျ့သလဲဆိုတာ….
(၁) အလှပရေးရာကို ဂရုစိုကျပါ
မိနျးကလေးတိုငျးကတော့ အိုတယျ ငယျတယျရယျ မရှိအရှယျသုံးပါးလုံးလှခငျြနတေတျကွတာပါပဲ ။ဒါပငျမဲ့ လှခငျြတိုငျးလညျးအရှယျကရှိသေးတယျလေ ။ ဒါကွောငျ့ပြိုမဈြနုနယျလှနျးတဲ့ဒီလို အရှယျမှာ ရှိသမြှပိုငျဆိုငျထားသမြှ သဘာဝအလှတှကေို ဖျောပွတတျဖို့အရေးကွီးပါတယျ။ နောကျမှ ငါသာငယျရငျ ဒါမြိုးလေးလုပျမှာဆိုတာမြိုးနဲ့နောငျတမရပါစနေဲ့။
(၂) အလုပျတဈနရောကနတေဈနရော ပိုကောငျးတဲ့နရောကိုပွောငျးရှအေ့ခွခေဖြို့ဝနျမလေးပါနဲ့
အလုပျတဈနရောကနတေဈနရောကောငျးတဲ့နရောတှကေိုကူးပွောငျးဖို့အဆငျပွပေါ့မလား ဘာညာတှေးပူမနပေါနဲ့။ ငယျတုနျးမှာနရောကောငျးကိုရှာပါ ၊ ကွီးလာတဲ့အခြိနျမှာအခွခေိုငျဖို့ ငယျတုနျးရှေးခယျြတတျဖို့လိုပါတယျ။
သူငယျခငျြးတှနေဲ့စိတျတူကိုယျတူခရီးစုသှားပွီး မိတျဆှသေဈတှနေဲ့နရောသဈတှမှောမိတျဖှဲ့ပါ။ လူသဈတှဆေီကနေ သငျခနျးစာအသဈတှေ အတှကွေုံ့သဈတှကေိုမြှဝယေူပါ။
(၄) ကိုယျ့ရဲ့ဆံပငျ ပုံစံ အဝတျစားပုံစံတှကေိုတဈသတျမှတျထဲမထားပဲပွောငျးလဲကွညျ့ပါ
တဈသတျမတျကွီးတညျးမသှားပဲ ငယျတုနျးရှယျတုနျး နုတုနျးလှတုနျးမှာ ကိုယျ့ရဲ့စတိုငျကို အပွောငျးလဲလေးတှဖေနျတီးကွညျ့ပါ။
သိပျကို ဦးနှောကျညဏျရှငျနတေဲ့ အခြိနျကာလတဈခုမှာ လလေ့ာမှုအသဈတှကေိုလုပျကိုငျဖို့ စတငျဖို့ဝနျမလေးပါနဲ့။ သငျတကယျလုပျခငျြတဲ့အခြိနျကရြငျ ဦးနှောကျကမှတျနိုငျစှမျးရငျရှိခငျြမှရှိတော့မှာပါ။